Sida Looga Saaro Internet Explorer 7 | Martech Zone
Waxaa jira tan oo folks ah oo weydiinaya sida loo tirtiro IE7. Ka tirtiro guddiga ku darista / Ka-saar barnaamijyada. Hubso in sanduuqa “show updates” la calaamadeeyay. Waxyaabaha xiisaha lihi waxa weeye in gelitaanka Koontaroolku yahay “Windows Internet Explorer 7” oo kuma hoos qoran Microsoft ama si fudud Internet Explorer:
Guji si aad u Dhaweyso:
Maxaad u tirtiri lahayd? Hagaag… aqri wixii iigu dambeeyay gelitaanka.
Hit oo Run Sabtida!
Oktoobar 20, 2006 at 2:49 PM
Waxaad tahay halyeeygeyga.